Yaalii Fonqolcha Mootummaa Naannoo Amaaraa - BBC Afaan Oromoo
23 Waxabajjii 201923 Waxabajjii 2019
...tti maxxanfame 12:35 23 Waxabajjii 201912:35 23 Waxabajjii 2019
Sadarkaa Naannootti fonqolchi motummaa akka hinjirree ABN ibse
Ibsa motummaan federaalaa yaaliin fonqolcha motummaa Naannoo Amaaraatti yaalame ture jechuun baaseen wal qabatee, hedduun attamiin fonqolchi sadarkaa naannootti gaggeefama jechuun gaafataa jiru.
Dhimmuma kanarrattis Dura Taa’aan Paartii Sochii Biyyaaleessaa Amaaraa (ABN) Obbo Dassaalany Caannee ‘‘Fonqolcha jechuuf tokkoffaa raga gahaan hinjiru. Sadarkaa lammaaffaatti naannichatti kan raawwatame haleellaa aanga’oota olaanooti'' jedhan.
Kanaaf sadarkaa naannootti fonqolcha jechuun ni danda'amaa jechuun gaafatu.
ABN wayita ammaa kanatti eenyu akka haleellicha raawwateefi duba ta’uun eenyu akka qindeesse raga walitti qabaa jiraachu kan himan obbo Dasaalanyi, du’a aanga’ootaa fi janaraalootaatiin gaddi itti dhagaahamuu maqaa Paartii isaaniitiin ibsaniiru.
Komishinara poolisii dabalatee, aangaa’oonni Naannoo Amaaraa taateen kun ‘haleellaa aangawoo olaannoorratti raawwatame jechuun ibsaa jiraachuu kan himan Obbo Dasaalanyi, motummaa Federaalaa ''fonqolcha motummaa'' jechuun fayyadamuun kan bitaa namatti galuudha jedhaniiru.
fuula fb Dassaalany CaanneeCopyright: fuula fb Dassaalany Caannee
...tti maxxanfame 11:46 23 Waxabajjii 201911:46 23 Waxabajjii 2019
Haala yeroo ilaalchisuun Itti aanaan Pirezidaantii Naannoo Tigraayi Dr Dabratsiyoon Gabramikaa’el har'a ibsa kennaaniiru.
Ajjeechaan Janaraal Sa’ire irratti raawwatame, kallattiin yaalii fonqolchichaa waliin kan walqabate ta'uu kan dubbatan Dr. Dabratsiyoon, ‘‘humnootiin humnaan aangoo qabachuuf yaalanis namoota ittisa biyyaa hogganan, kaayyoo isaanitiif gufuudha jechuun ajjeessan,’’ jedhaniiru.
Yaaliin fonqolchichaa fi ajjeechaan raawwataman hundi kan itti karoorfaman ta’u kan himan Dr Dabratsiyoon,''waan akkasii raawwachu akka danda’an sochiilee isaanii irraa hubachuun ni danda’ama. Kanaanis hindhaabbatan. Qabsoorratti argamna. Dhumarrattis ni mo’anna,’’ jechuun dubbataniiru.
Waa'ee Janaraal Asaaminew Tsiggee maal beektu?
Waa'ee Janaraal AsaaminewTsiggee qabxiilee muraasa
Erga Dargiin aangoorraa buufameen boodas, naannoo dhalootaa isaanitti bulchaa ta'un mudamanii tajaajilaaniiru.
Sababii yaalii fonqolcha motummaa naannichatti kaleessa taasifameen, lubbuu aanga’oota afurii galaafate duba akka jiran paartiin naannicha bulchu ADP'n beeksiseera.
...tti maxxanfame 10:36 23 Waxabajjii 201910:36 23 Waxabajjii 2019
Qaamoleen yaalii fonqolchaa kana keessatti hirmaatan adamfamanii to'annoo jala akka oolaniif MM Abiy ajaja duula keennuu isaanii ibsichi eerera.
Dhimmichi kan naannoo tokko qofa osoo hin taanee, guutuu biyyattii jeequu kan kaayyefate waanta'eef, mootummaan Federaalaa fi kan naannolee nageenya uummataa mirkaneessuuf qindoomuun waliin hojjechaa akka jiran ibseera.
...tti maxxanfame 8:56 23 Waxabajjii 20198:56 23 Waxabajjii 2019
Sochiin baratamaan jiraattota magaalittii jijiirama qabaachuu baatuus, bahaaafi galma magaalittiirratti to'annoon cimuun beekameera.
Magalaan Bahirdaariis to'annoo fi eegumsa cimaa keessa akka jirtu barreerra.
Jiraattootni magaalitti gara mana jireenyaa Dr. Ambaacheew deemuun gadda isaanii ibsaa akka jiran kanneen BBC'n dubbise himaniiru.
...tti maxxanfame 8:37 23 Waxabajjii 20198:37 23 Waxabajjii 2019
''Haleellaan raawwatame qabsoo eegallerraa duubatti kan nu deebisu osoo hin taane itti kan nu cimsudha'' jedhaniiru.
...tti maxxanfame 8:25 23 Waxabajjii 20198:25 23 Waxabajjii 2019
- Janaraal Sa’ira Mekonnin – Hoogganaa Waraanaa biyyattii
...tti maxxanfame 8:06 23 Waxabajjii 20198:06 23 Waxabajjii 2019
Janaraal Sa'iree Mekonniin eegduu isaaniiniin ajjeefaman
Hooganaan waaraanaa Itoophiyaa Janaraal Sa'iree Mekonniin eegdu isaaniin mana isaanii keessatti ajjeefamuu Waajirri Ministira Muummee amma ibsa kennaa jiruun hime.
Itaamaajorshuumiin Waraanaa Itoophiyaa, Janaraal Sa'ireen yaalii fonqolchaa Naannoo Amaaraatti raawwatame to'achuuf adda durummaan hoogganaa akka turan, MM Abiy ibsa halkan edaa ibsa kennaniin himaniiru.
Hoogganaan waraanaa gameessi biroon Meejar Janaraa Gazaa’ii Abarraa kan isaan waliin turaniis ajjeefamuun mirkanaa'eera.
PM officeCopyright: PM office
...tti maxxanfame 7:23 23 Waxabajjii 20197:23 23 Waxabajjii 2019
Ganaraal Asaaminew yaalii fonqolchaa kana nama hoogganan akka ta'e ibsa dhaaba naannicha buchuu waabeffachuun sabaa himaan naannoo Amaaraa beksiseera.
...tti maxxanfame 7:06 23 Waxabajjii 20197:06 23 Waxabajjii 2019
Qaamooleen haleellicha gaggeessaniis tibba waligahiirra turan ta'uun barameera.
Dr Ambaachoon pirezidaantiin naanniicha duraanii Obbo Gadduu Indaargaachoo bakka bu'uun gara aangootti erga dhufanii ganaa baati shaniif deemu ture.
Qaamoolee yaalii fonqolchichaa keessa harka qabu jedhamanii shakkamanis to'annoo jala olfamunsaanii ibsameera.
...tti maxxanfame 6:40 23 Waxabajjii 20196:40 23 Waxabajjii 2019
Preezidantiin Naannoo Amaaraa Ambaachoo Mokonniin (PhD) ajjeefamuun mirkanaa'e.